Fatịlaịza "Kemira" ("Fertik"): ụdị na atụmatụ nke ngwa ahụ - Fatịlaịza - 2019
Kemira - Ọ bụ ejiji ịnweta, nke nwere mgbagwoju nke micro-na macro-ọcha maka ụfọdụ ụdị osisi.
Ogologo ngwa a di uba: eji ya eme ihe n'ubi, ogige na oru ugbo.
Kemira: ụdị fatịlaịza
Mgbụsị akwụkwọ ụbịa
Akụkụ nke ngwa na uru ndị dị na fatịlaịza
Fatịlaịza "Kemira" ("Fertika") dị na ụdị nnukwu ihe nchịkọta ịnweta. Ha dị iche na usoro nke ngwa (granular, mmiri mmiri, soluble mmiri, organic-mineral), na oge na nzube. Ha dị elu, na-akpali ọganihu na mmepe nke osisi ahụ.
Otu ụdị osisi maka ọganihu na mmepe chọrọ otu ụdị nri. Iji gboo mkpa nke osisi na oriri na-edozi mepụtara ụdị mgbagwoju anya.
Otu n'ime nri ndị kasị ewu ewu maka ubi a na-akọ ubi na ogige bụ ihe agrichemical mineral "Azofoska".
Ngwakọta nke ịnweta nkwanye mmiri nke nwere ike imebi na mmiri ma jiri ya dị ka mgbakwasa mgbọrọgwụ, mgbakwasa foliar, na-eji usoro mgbọrọgwụ mmiri. Nkwadebe na-agụnye potassium, phosphorus, nitrogen na selenium, nke na - emezi metabolism, na-eme ka ọdịnaya shuga dị na mkpụrụ osisi na vitamin ọdịnaya.
"Kemira Lux" a na-emepụta fatịlaịza n'ụdị ezigbo ihe ndị dị n'ime mmiri, nke a na-edozi ya na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri. Nwere ihe dị iche iche nke ịnweta maka osisi ime ụlọ, okooko osisi, seedlings, akwụkwọ nri. Na-akwalite nhazi buds, na-eme ka usoro okooko osisi ahụ dịkwuo ogologo, na-eme ka ụcha nke okooko osisi jupụta. Na-akwalite nhazi mkpụrụ. Eji ya mee ihe n'uzo nkwadebe tupu agha agha, osisi pulitere ngwa ngwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-etolite. Nri a pụrụ iche na ọ na-amalite ọrụ ozugbo ozugbo ọ banyere n'ala.
Fertilizer ịnweta mgbagwoju anya, a na-enye ya n'ụdị granulu site na ngwakọta nke akwa components. A na-ebute ya n'ala na isi nhazi n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ oge opupu ihe ubi. Ọ nwere ogologo oge nke ihe.
Ị ma? Mgbakwasị mgbụsị akwụkwọ na-eme ka ala dị ala na-eme ka ụwa dị ala na-adaba na okpomọkụ ma na-enyere osisi aka ịtachi obi n'oge oyi.
A na-eji mgbakwasa ụwa dum ma n'ala na-emeghe ma na greenhouses. Na-enye nje ahụ otu setịpụ nke ihe ndị ịnweta ihe na-agba ọsọ. Ọnụnọ nke nnukwu ihe mgbagwoju anya na-eme ka o kwe omume ịghara itinyekwu fatịlaịza ọzọ n'ala.
Iji meziwanye uto nke ihe ubi na okooko osisi a na-ejikarị ihe omimi mejuputara "Ntughari".
Nri ndị a chọrọ maka oge mgbụsị akwụkwọ nwere ihe ndị ịnweta, phosphates na potassium, bụ ndị nwere mmetụta dị mma na e guzobere usoro mgbọrọgwụ na mkpịsị mkpụrụ osisi ma mee ka anụ ahụ dị mkpụmkpụ sie ike, nke a na-ejidekwa na oyiing. A na-emepụta nri ndị a na-eme maka oge opupu ihe dị n'ụdị granulu ma nwee macro- na microelements na nhazi dị mkpa maka na-amụba njupụta nke ahihia, na-enye ụcha kpụ ọkụ n'ọnụ na kpụ ọkụ n'ọnụ nke ahịhịa.
Ọ dị mkpa! Ekwela ka ojiji nke mgbatị mmiri dị mgbagwoju anya na ọdịda! Fatịlaịza mmiri nwere mmiri dị elu nke nitrogen nke na-eme ka ahịhịa too. Ụmụaka na-eto eto enweghị ike ịnagide ntu oyi ma ghara idi akwa frosts, ahihia ga-ifriizi.
Nkwadebe granular nwere mgbagwoju anya nke ihe nile macro na micronutrients dị mkpa na-enye ọzụzụ nnukwu inflorescences agba dị ọcha ma na-enwu gbaa.
Na-amụba oge nke okooko. A na-enye ihe edozi ka ọ gbakwunye ihe ndị na-edozi ma ọ bụ okooko osisi.
Ị ma? Ịhọrọ ụfọdụ ụdị okooko osisi, ị ga-achọ ịma ụdị ọnọdụ ha na-eto nke ọma, mgbe ahụ, ọ ga-adịrị gị mfe ịmepụta ebe dị mkpa, buru ihe mgbakwasa n'elu maka okooko osisi buru ibu na ogologo.
Nkọwa granular ịnweta fatịlaịza mere kpọmkwem maka poteto. Ngwakọta ahụ nwere nnukwu mmiri nwere magnesium na sọlfọ, nke na-enye ohere ka osisi ahụ na-alụso ọrịa ọgụ.
A na-eji tomato ọgwụ "Kemira" mee ihe n'oge opupu ihe ubi n'oge akuku, na n'oge uto nke poteto dị ka mgbakwasa n'elu. Potassium dị na mgbakwasa n'elu enwekwu nchekwa nke tubers.
Ekepụtara maka osisi dị mkpa nke ala acidic, enwere ọnụ na pH, dịka o kwere mee ha mkpa. Akwadoro maka conifers, hydrangeas, azaleas, garden bilberries, rhododendrons.
Ọ dị mkpa! E kwesịghị ịkụnye ụdị osisi coniferous dị iche iche, ebe ọ bụ na ha na-ahapụ ụdị ọdịdị dị egwu ha ngwa ngwa.
N'ihi nnukwu ọdịnaya nke magnesium, sọlfọ na awara ígwè enweta emerald agba, na calcium soluble mmiri na-akwalite Ome ahụ, anaghị ekwe ka ha gbanwee odo ma nwụọ. Ngwongwu kacha elu na-etinye aka na ngwa ngwa site na osisi ma na-enye aka n'uto ha.
Frize conifers kwesịrị nlezianya, kpochapu nri nri, ka ọ na-ere usoro mgbọrọgwụ nke osisi.
Ngwa osisi granular, nke nwere ike ịmepụta mmiri na mmiri, nke nwere nnukwu potassium. Otu granule nwere ihe oriri niile dị mkpa maka osisi ahụ. Enweghị chlorine. A na-atụ aro ọgwụ ahụ maka ịmị akwụkwọ nri na ọhịa na griin ha, maka osisi mkpụrụ, tomato.
Iji na-eri ose na tomato, ị nwere ike iji organic fatịlaịza "Signor Tomato".
Enweghi oru ugbo nwere ike ime n'enweghi mmanu. Iji nweta ihe dị elu ma dị ọcha, ọ dị mkpa itinye uwe ejiji dị mma nke sitere na ihe dị ọcha na akwa. FERTIKA fatịlaịza na-adabere na ngwongwo nke ụmụaka ndị ụmụaka na-eme, na-echebara uru nke ala na ichebe gburugburu ebe obibi. Nri uru fatịlaịza:
enweghị chlorine na nnukwu ọla na nkwadebe, nke dị mma maka ala;
omume ogologo oge nke ọgwụ;
ihe a na-eme n'usoro nke fatịlaịza na-enye ọnọdụ maka mmepe na mmepe nke osisi;
mgbe o na-eji Kemira, nchikota nitrate n'ime akwukwo nri na nkpuru osisi ka ewepu;
na-eme ka mgbochi nke osisi na-eme ka mmetụta ndị mmadụ ghara ịdị;
Fatịlaịza "Kemira" na-emepụta n'ụdị nsogbu dị iche iche, nke na-enye ntụsara ahụ. Maka ihe dị mma, a na-etinye ngwugwu ahụ na nchịkọta dị iche iche;
ogologo ndụ nke ọgwụ;
bụ ngwá ọrụ nchebe megide ọtụtụ ọrịa, ebe ọ na-eme ka mkpụrụ osisi ahụ ghara isi ike, na-eme ka ha na-eguzogide ọgwụ ndị na-akpata ero na nje bacteria;
Ụkpụrụ ziri ezi nke mgbakwasa elu dị mma ma maka osisi kwa afọ, na maka ịkọ ihe;
abawanye n'oge nchekwa nke ihe ubi a kụrụ n'ubi;
mfe nke iji na ego ọnụ.
Kemira ngwaahịa, atụmatụ ngwa ngwa fatịlaịza, ọnụego ngwa na ụzọ na-akọwa n'ụzọ zuru ezu na ntuziaka ngwugwu. Na-enweghị akwa mgbakwasa maka osisi, bushes, osisi ọ gaghị ekwe omume ime. Fatịlaịza a na-ahọrọ nke ọma na-enye gị ohere iji nchịkọta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, iji nweta ogologo oge osisi mara mma.
Ụtọ cherry "Adeline": njirimara, uru na nkwekọrịta
"Stellar" nke ahihia: usoro ngwa na ngwa ngwa
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Atụmatụ na uru nke fatịlaịza osisi "Kemira" ("Fertika")